रंगशाला सबै स्थानीय तहको प्राथमिकतामा
प्यूठान । प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले सुविधासम्पन्न प्रदेश स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न थालेकोे छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रू. १७ करोडको लागतमा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मार्सिवाङमा उक्त रंगशाला निर्माण गर्न थालिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको बताइएको छ ।
इन्डोर र आउटडोर खेल खेल्न मिल्ने गरी ५२ रोपनी क्षेत्रफलमा रंगशाला बनाइने माण्डवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर रिजालले बताए । आउटडोरअन्तर्गत क्रिकेट र फुटसल तथा इन्डोर खेलका लागि ६० मिटर लामो कभर्डहल निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । रिजालले भने, ‘स्थानीयले केही जग्गा उपलब्ध गराए फुटबल मैदान पनि निर्माण गर्छौं ।’
रंगशालामा सुविधासम्पन्न कभर्ड हल, प्याराफिटसहितको क्रिकेट, फुटसल र फुटबल मैदान, पार्किङस्थल, चमेनागृह, प्रशासनिक भवन तथा शौचालय निर्माण गरिने योजना छ । उक्त संरचना निर्माणका लागि मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक रू. १७ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीधर रोकाले बताए । उनका अनुसार आगामी दुई वर्षभित्र रंगशाला सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गाउँपालिकाको गौरवका योजनाको रूपमा रंगशाला निर्माणलाई अघि बढाइएको छ । रंगशाला निर्माणमा हालसम्म रू. ५२ लाख खर्च भएको छ । अहिले मैदान सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ भने प्रशासनिक भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीधर रोकाले गाउँपालिकाले सबै लगानी गर्न नसक्ने भएकोले प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने बताए । उनका अनुसार रंगशाला निर्माणका लागि चालू आवमा रू. २० लाख छुट्याइएको छ । रंगशाला निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले गत आवमा रू. ४६ लाख सहयोग गरेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
जिल्लाको ऐरावती गाउँपालिकाले पनि खेलकुद मैदान निर्माण कार्य शुरू गरेको छ । गाउँपालिकाले १३४ रोपनी जमीनमा खेल मैदान निर्माण गर्न थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नविलविक्रम शाहले जानकारी दिए । खेलक्षेत्रबाट गाउँपालिकालाई चिनाउन तथा खेलाडीलाई प्रोत्साहनका लागि रू. २३ करोडको लागतमा खेलकुद मैदान निर्माणको काम अघि बढाइएको हो ।
अध्यक्ष शाहका अनुसार खेल मैदान क्रिकेट, फुटबल र भलिबल खेल्न मिल्ने गरी निर्माण गरिने छ । खेल मैदान निर्माणमा हालसम्म रू. ६९ लाख खर्च भइसकेको छ भने चालू आवका लागि रू. ४० लाख विनियोजन भएको छ । हाल मैदान सम्याउने, पर्खाल तथा जाली लगाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय जिल्लाका सबै स्थानीय तहले खेलक्षेत्रलाई महत्व दिएर रंगशाला निर्माण गरिरहेका छन् । झिमरुक गाउँपालिकाले पनि गत आवमा करोडौं रुपैया खर्चेर मैदान निर्माण गरेको छ । त्यसबाहेक स्वर्गद्वारी नगरपालिका तथा सरुमारानी, नौबहिनी र गौमुखी गाउँपालिकाले पनि खेलकुद मैदान निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले खेलकुद मैदान निर्माण गर्न थालेपछि जिल्लाका खेलाडीहरू उत्साहित देखिएका छन् ।
चुनढुंगा खानी होल्ड गरेको आरोप, चौकुने सिमेन्टको भविष्य अन्यौलमा [२०७६ माघ, ७]
बाँकेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो [२०७६ माघ, ७]
प्यूठानका कृषक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित[२०७६ माघ, ७]
व्यावसायिक प्रेरणाको स्रोत बन्दै रेन्बो ट्राउट पालन [२०७६ माघ, ७]
सडक मर्मत नहुँदा हिउँदमा पनि चलेनन् गाडी [२०७६ माघ, ६]